नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)का छोरा प्रकाश चन्द पनि बने डाक्टर – पुरा पढ्नुहोस्……
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)का छोरा प्रकाश चन्द पनि बने डाक्टर
काठमाडौं । प्र’तिबन्धित पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा प्रकाश चन्द डाक्टर बनेका छन् । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालै लिएको परीक्षा उत्तिर्ण गरेका हुन् ।
चन्दलाई गत मंसिरमा काउन्सिलले लिएको परीक्षामा सहभागी हुनबाट ब’ञ्तित गरिएका थिए । मेडिकल माफियावि’रुद्ध डा. चन्दले सं’घर्ष र आ’न्दोलनको ने’तृत्व गरेका थिए । चन्दले काउन्सिलको परीक्षा पास गरेपछि उनलाई मान्यता थापाले ब’धाई र शुभकामना दिएकी छिन् ।उनले सामाजिक फेशबुकमार्फत प्रकाशलाई ब’धाई दिएकी छिन्।
उनले लेखेकी छन – ”मङ्सिर मा मेडिकल मा’फिया बि’रुद्ध को स’ङ्घर्ष र मा’फिया ले रचेको पे’स्तोल ष’डयन्त्र का कारण NMC license exam दिन नपाएर अहिले कोरोना को अ’न्यौलग्रस्त स्थिति मा भएकोे ऊक्त परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु भएको मा डा.प्रकाश चन्द लाई हार्दिक बधाई अनि धेरै धेरै शुभकामना ।
पढाई र सं’घर्षलाई अनुशासित ढं’गले संचालन गर्ने हो भने दुबई कुरा नबिगारि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अफ्नो विचार सही सावित गर्नुभएको छ। आफ्नो ज्ञान सदैव गरिब र दुःखी जनताको निम्ति समर्पण गर्ने चाहाना सदैव पूरा भैराहोस ।”
Prevह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य : प्रतिकेजी मासु र अण्डाको कति ?
Nextआजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल भाद्र २३ गते मंगलबार इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर ८ तारीख
श्रृखंलाले मध्यरातमा नेपाली भुमि टेक्दा उर्लियो जनसागर- भाबूक हूदै सबैलाई यस्तो भनिन् हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आजको राशिफलःबि.स.२०७६ साल पुस ७ गते सोमबार इश्वी सन २०१९ डिसेम्बर २३ तारीख
रातारात इन्टरनेटमा आखाँ झिम्क्याएर भईरल बनेकी प्रियाको फेरी आयो यस्तो भिडियो जुन निकै भईरल बन्दै ,हेर्नुहोस सोहि भिडियो हेर्नुहोस
कुलमान घिसिङले गरे अर्को यस्तो काम, अव मिटर रिडिङ्ग गर्न जिनै नपर्ने! सुरू भयो यस्तो प्रविधिको